Britain oo xoojinaysa xiriirka caalamiga - BBC News Somali
Britain oo xoojinaysa xiriirka caalamiga
11 Luulyo 2016
Wasiirka maaliyada ee Britain ayaa bilaabaya booqasho waddamo dhowr ah si loo dhiiri galiyo maalgashiga.
Wasiirka maaliyada ee Britain George Osborne, ayaa balanqaaday in Britain ay ahaato mid adduunka ku xiran, ka dib markii UK ay u codaysay inay ka baxdo Midowga Yurub.
Inkastoo UK ay ka baxayso Midowga Yurub, "kama tagayno caalamka" ayuu yiri.
Wuxuu booqanayaa New York, Singapore, iyo Shiinaha si uu wadahadal ula yeesho maalgashatada toddobaadyada soo socda.
UK ayaa ah waddanka ugu wayn ee Yurub ee xiriirka ganacsi la leh Maraykanka, sidoo kale Maraykanka ayaa ah suuqa ugu wayn ee UK ay alaabada u dhoofiso.
UK ayaa u dhoofisay Maraykanka alaabo qiimahoodu dhan yahay £88 bilyan 2014-kii taasoo ah 17% alaabada ay dhoofisay UK, sanadkii horena UK waxay ahayd waddanka lixaad ee ugu wayn ee Maraykanka uu ganacsiga la leeyahay.
Mr Osborne ayaa sheegay, " inkastoo go'aanka ay Britain ay uga baxday Midowga Yurub ay keenayso culays dhaqaale, waa inaan samaynaa wax walba oo aan samayn karno si aan uga dhigno UK meesha ugu fiican ee ganacsi laga samyn karo.
"Britain iyo Maraykanka ayaa ganacsigooda uu isku furnaa 200 oo sano ee ugu danbaysay, waana muhiimada ugu wayn in la adkeeyo xiriirka.
"Sidaas darteed ayaan u booqanayaa Maraykanka, Shiinaha, iyo Singapore toddobaadyada soo socda, waana sababta ay fariintayda caalamka ay tahay, Britain haddii ay ka baxayso Midowga Yurub, kama tagayso caalamka."